China PC siri ike mpempe akwụkwọ / oghere mpempe akwụkwọ extrusion Line – CHEER Manufacture and Factory |Jiahao
▷ ọrụ akụkụ atọ
Ngwá ọrụ ahịrị mmepụta nwere akụkụ atọ
➀ onye na-elekọta ọrụ: akụrụngwa maka ọdụ ọ bụla iji mezue ọrụ ọrụ.
Dị ka: akụkụ ebu n'ọnọdu igwe, ọgwụgwụ ebu homing igwe, akpaka-atụ na nri igwe na ndị ọzọ 12 ụdị ngwá;
➁ onye na-arụ ọrụ: akụrụngwa na-enye ike ọrụ na arụ ọrụ maka ahịrị niile.
Dị ka: igwe ngbanwe, igwe na-ebugharị, igwe homing, ikpo okwu na-ebuli elu na ụdị 10 ndị ọzọ;
➂ ịkpụzi onye ọbịa: prefabricated akụkụ ịkpụzi akụrụngwa.Gụnyere ọtụtụ ọkọlọtọ onwe ọnọdụ anwụ anwụ.
▷ usoro eruba nke ahịrị mmepụta
Mpaghara ọmụmụ ihe: 120 × 15㎡
The akpụ anwụ ogbo bụ na-arụ ọrụ ọwa nke ala ọdụ mezue preset akpụ usoro omume nke dị iche iche ọrụ;Mgbe ahụ, tinye ọwa mmezi n'okpuru ala maka mmezi njikwa;Mgbe emechara mmezi dị ka atụmatụ ahụ si dị, a na-ebuli ya n'ala ma megharịa ya mgbe ewepụtara akụkụ ndị ruru eru.
▷ okirikiri nhọrọ ukwuu
Ngwa niile dị na ahịrị mmepụta ahụ na-eji ụdị modular kpụ ọkụ n'ọnụ, yabụ na ọ nwere uru nke nhazi dị elu, nrụnye na ndozi dị mma, ndakọrịta nkwalite zuru oke, yana enwere ike họrọ ma tinye ya n'ọrụ modulu na ahịrị mmepụta PC ọdịnala mbụ.
▷ mfe ọrụ na elu arụmọrụ;
▷ akpaka mgbakọ, disassembly na njem nke akụkụ anwụ na njedebe anwụ na-ghọtara;
▷ mmezi n'okpuru ala
A na-echekwa nchekwa dị elu, nchekwa ike na nchekwa gburugburu ebe obibi;
▷ ego ntinye ego zuru oke nke ahịrị mmepụta ọhụrụ na-ebelata nke ukwuu
Dị ka: ọnụ ala;Ọnụ ego e ji wuo isi obodo;Ọnụ akụrụngwa;Ọnụ ego ọrụ;➄ ụgwọ ọrụ;Ọnụ ego gburugburu;Ọnụ ego njikwa.
Nke gara aga: CO-Extruder
Osote: Ahịrị EXTRUSION IHE MMADỤ PVC ịchọ mma
Ahịrị Extrusion mpempe akwụkwọ pc
Igwe na-ekpochapụ mpempe akwụkwọ plastik
Ahịrị Extrusion mpempe akwụkwọ PP rụrụ arụ
Mpụpụ mpempe akwụkwọ PP Hollow Grid
Ahịrị Extrusion mpempe akwụkwọ PP
Igwe ewepu mpempe akwụkwọ PP
Ahịrị Extrusion mpempe akwụkwọ PP Pc oghere
PP Pe Pc oghere mpempe akwụkwọ Extrusion Line Machine